MB 2015 Maarso, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Dabaaldega sarakicidda Ciise
Sannad walba maalinta Axadda ee Axadda, Masiixiyiinta ayaa adduunka oo dhan isugu timaadda si ay ugu dabaaldegaan sarakicidda Ciise. Dadka qaar waxay isku salaamaan salaanta dhaqanka. Oraahdani waxay akhrineysaa: “Wuu kacay!” Jawaab ahaan, jawaabtu waa: "runti wuu kacay!" Waxaan jecelahay inaan u xusno warka wanaagsan sidan, laakiin jawaabteenna salaanta waxay umuuqataa wax yar oo basaasnimo ah. Waxay u egtahay inaad haysato "Markaa?" jeclaan lahaa Taasi waxay iga dhigtay inaan fikiro.
Sannado badan kahor, markaan isweydiiyey su’aasha ah qaadashada sarakicidda Ciise Masiix si heer sare ah, waxaan furay Kitaabka Quduuska ah si aan jawaab uga helo. Markii aan aqriyay, waxaan ogaaday in sheekadu aysan soo gabagabeynin salaantaas.
Xertiisii ​​iyo xertiisiiba way farxeen markay ogaadeen in dhagxaanta laga giringirinayo, xabaashu faaruq tahay, oo Ciise uu ka soo sara kacay kuwii dhintay. Waxaa si fudud loo ilaawi karaa in Ciise u muuqday xertiisii ​​40 maalmood ka dib sarakiciddiisa ka dib oo iyaga siisay farxad weyn.
Mid ka mid ah sheekooyinka aan ugu jeclahay Easter ayaa ka dhacay waddada Emmaus. Laba nin waxay ku qasbanaadeen inay socod lug ah aad u walaac ku socdaan. Laakiin waxay ka badneyd safarkii dheeraa ee niyad jabsanaayay. Quluubteeda iyo maskaxdeeda ayaa xanaaqay. Waxaad arkaysaa, labadan waxay ahaayeen kuwa raacsan Masiixa, maalmo ka horna, ninkii ay ugu yeedheen Badbaadiye ayaa iskutallaabta lagu qodbay. Markii ay sii socdeen, qof aan la garanayn ayaa si lama filaan ah ugu yimid iyaga, iyaga oo jidka ag maraya, oo wada sheekaystay, iyagoo ka soo qaadaya meeshii ay joogeen. Wuxuu baray waxyaalaha la yaabka leh; oo ka bilaabmaya nebiyada oo sii maraya Qorniinka oo dhan. Waxay indhaheeda u furay macnaha nolosha iyo geerida macallinkeeda ay jeclayd. Shisheeyahaan ayaa murugaysnaa waxayna u horseeday rajo inay sii socdaan markay hadlayaan.
Ugu dambeyntiina waxay yimadeen halkii ay aadeen. Dabcan, nimanku waxay weydiisteen shisheeyaha caqliga badan inuu la joogo oo wax la cuno. Waxay ahayd oo keliya markii shisheeyuhu u duceeyey oo uu jebiyey kibista ay u soo ifisay iyaga waxayna aqoonsadeen cidda uu yahay - laakiin ka dib wuu baxay. Sayidkooda, Ciise Masiix, wuxuu ugu muuqday iyaga xagga jidhka sidii mid soo kacay. Ma jirin diidmadaas; Runtii wuu kacay.
Intii uu socday saddexdii sano ee Ciise adeegga ahaa, wuxuu qabtay waxyaabo yaab leh:
Wuxuu quudin jiray 5.000 oo qof rootiga iyo kalluunka qaarkood; Wuxuu bogsiiyey curyaankii iyo indhoolayaashii; Wuxuu jinniyada saaraa oo kuwii dhintay soo sara kiciyey. isagu wuxuu dul dul socday biyaha wuxuuna ka caawiyey mid xertiisa ka mid ah inuu sidaas oo kale sameeyo! Dhimashadiisa iyo sarakicistiisa ka dib, Ciise wuxuu qabtay howlihiisa si ka duwan. Afartan maalmood kahor Ascension, Ciise wuxuu ina tusay sida ay Kaniisaddu u noolaan karto warka wanaagsan. Oo muxuu sidan u muuqday? Wuxuu quraac la wadaagay xertiisii, oo wax baray oo dhiirrigeliyey qof kasta oo uu la kulmay jidkiisa. Waxa kale oo uu caawiyay kuwa shakiyey. Hadana, ka hor intuusan jannada tegin, xertiisii ​​ayuu faray inay sidaas oo kale sameeyaan. Tusaalaha Ciise Masiix wuxuu i xasuusinayaa waxa aan ku qirayo bulshadayada iimaanka. Ma dooneynno in aan joogno albaabbada kaniisadda, waxaan rabnaa in aan gaarno wixii aan helnay oo aan dadka u muujinno jacayl.
Waxaan ku xirnaa muhiimad weyn si aan u gaarno wanaagga oo dhan, nimco iyo u kaalmaynta dadka meesha aan ka heli karno. Tan macnaheedu waa in si fudud loola wadaago qof qof, sida Ciise ku sameeyay Emmaus. Ama waxaa laga yaabaa in caawinaadani lagu muujiyo bixitaanka fuulitaanka ama u-iibinta dukaannada waayeelka, ama laga yaabee inaad siiso saaxiib niyad jab erey dhiirrigelin leh. Ciise wuxuu ina xasuusinayaa siduu isagu, jidkiisa fudud, ula xiriiray dadka, sida wadada Emmaus iyo sida muhiimka u tahay sadaqada. Waa muhiim inaan ka warqabno sarakiciddeenna ruuxiga ah ee baabtiiska. Masiixi kasta oo Masiixa rumaystaa, lab ama dhadig, waa abuur cusub - ilmo Ilaah. Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ina siinayaa nolol cusub - nolosha Eebbe inagu dhex jira. Sida abuur cusub, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu ina beddelaa si aan u noqonno kuwo aan ku sii lug lahaanno jacaylka Masiixa ee kaamilka ah ee Ilaah iyo dadka. Haddii noloshu Masiixa ku jirto, markaa annaguna qayb ayaan ku leenahay noloshiisa farxadda iyo jacaylka samirkaba. Waxaan qayb ka nahay silica uu ka qabo silica, dhimashadiisa, xaqnimadiisa, sarakiciddiisa, kor u qaadistiisa iyo ugu dambeyntiintiisa. Annagoo ah carruurta Ilaah, waxaynu nahay kuwo wax la dhaxla kuwa Masiix la midka ah, ee lagu soo daray cilaaqaadka saxda ah ee uu la leeyahay Aabbihiis. Sidaas daraadeed, waxaa nalagu barakeeyay wax kasta oo uu Masiixu inoo sameeyay si aan u noqonno carruurtii Ilaah jeclaaday, oo aan isaga kula midoobi doonno - had iyo jeer ammaanta!
Taasi waa waxa ay Kaniisadda Adduunka ee Ilaah tahay (WKG) waxay yeelataa beel gaar ah. Waxaa naga go'an inaan noqono gacmaha iyo lugaha ciise masiix heer kasta oo ururkeena ah halka ay aadka ugu baahan yihiin. Waxaan rabnaa inaan jeclaano dadka kale, sida Ciise Masiix inoo jecel yahay, anagoo u joogna kuwa niyad jabsan, rajona siinno kuwa u baahan iyo inaan tusno jacaylka Ilaah ee waxyaalaha yar iyo weynba. Waqtiga aan u dabaaldegno sarakicidda sarakicidda Ciise iyo nolosheenna cusub ee aan ku dhex nool nahay, ha iloobin in Ciise Masiix uu sii shaqeynayo. Kulligeen waan ku hawlan nahay wasaaraddan, in kastoo aan ku soconno jid boodh ah ama miis fadhiya miiska cuntada. Waxaan kaaga mahadcelinayaa taageeradaada wanaagsan, ka qeybqaadashadaada, adeegga muhiimka ah ee aan u leenahay deegaankeena, dalka oo dhan iyo bulshada caalamka.
Aynu dabaaldegno sarakicidda